Pistorius oo lagu waayay eedeyn dil ah - BBC News Somali
Pistorius oo lagu waayay eedeyn dil ah
Garsooraha dhageysaneysay dacwadda ka dhanka ah Oscar Pistorius oo billowday in ay soo gudbiso guddoonkeeda ayaa Oscar ku weyday dambiga ah in uu si ula kac ah u dilay saaxiibtiisa Reeva Steemkamp, magaalda Pretoria sanadkii hore.
Garsoore Thokozile Masipa, ayaa sheegtay in dacwad soo oogaha dowladda uu ku guul dareystay in uu maxkamada ka hor caddeeyo in ninkan oradyahanka ah uu si ula kac ah ugu dilay saxiibtiis.
Kol sii horreysay, garsooraha waxa ay su'aalo galisay sida loogu kalsoonaan karo qaar ka mid ah makhraatiyaasha maxkamada oo ay sheegtay in ay suurtagal tahay in aanayba maqlin qeylo iyo rasaas sida ay iyaga ku dodeen.
Oscar Pistorius, ayaa oohin la dhacay marki ay garsooraha sheegtay in lagu waayey dambigaasi, balse waxaa lagu wadaa maalinta barita ah ay xaakimka soo gudbisa xukunkeeda la xariira dacwad kale. Dacwada kale ee xukunkeeda la sugaya ayaa ah in uu si kama ah u dilay saaxiibtiis, dambigaas oo haddii lagu helo ciqaabtiisa ay noqon karto 15 sano oo xarig ah.
Pistorius waxa uu beeniyey eedeymaha loo heysta, waxa uuna sheegay in uu toogtay saaxiibtiis isagoo u haystay in ay ahyed tuug u soo dhacay.
Oscar Pistorious, waa nin ku caan baxay tartamada orodka, waxa uuna ahaa qofkii ugu horreeyey oo cuuryaan labada lugood l'a oo ka qeyb gala cayaaraha oradada caalmiga ah.
Garoosraha ayaa lagu wadaa in ay maalinta barito soo gabagabeyso dacwada ka dhanka ah Oscar Pistorius.